काठमाडौं– इतिहामै छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मुख्यगरी विवाहको सिजन मंसिर, माघ, फागुन, असार महिनामा सुनको कारोबार धेरै हुने गर्छ । यसवर्ष मंसिरदेखि फागुनसम्म विवाहको सिजनमा पनि सुनको मूल्य खासै बढेन । नयाँ वर्ष सुरु भएपछि सुनको मूल्य क्रमशः बढ्दै गयो । सुनको मूल्य बढ्नुको कारण के हो ? नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले ६ कारण बताएका छन् । यस्ता छन्, सुनको मूल्य बढ्नुका कारण :
१. पहिलो कारण, अहिले अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक द्वन्द्व चर्कोको छ । विश्वभरका मानिस अन्य वस्तु खरिद गर्नतिर भन्दा सुन खरिदमा लागेका छन् । मानिस सुनमा आकर्षित भए । एउटा कारण यो हो ।
२. दोस्रो कारण, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सुनको कारोबारलाई महत्वपूर्ण लगानीको रूपमा लिएका कारण पनि सुनको मूल्य अकासिएको हो ।
३. तेस्रो कारण, विश्वबजारको अर्थतन्त्रको अनुपातमा सेयरमा भन्दा बढी सुनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता बढी भएर सुनको मूल्य बढेको हो ।
४. चौथो कारण, सुन बहुमूल्य धातु भएका कारण यसलाई ग्राहकले पुँजीको रूपमा बुझ्छन् । त्यसैले उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै सुन जम्मा गर्न खोज्छन् । विश्वबजारमा एकैपटक सुनको माग बढी भएका कारण सुनको मूल्य बढेको हो ।
५. पाँचौँ कारण, युरो र डलर ‘स्ट्रङ’ भयो । त्यसको प्रभाव सुनमा पर्यो । त्यसकारण पनि सुनको मूल्य बढेको हो ।
६. सुनको मूल्य बढ्नुमा हाम्रो आन्तरिक कारण पनि हो । नेपाल सरकारले प्रतिदशग्राममा नौ सय रुपैयाँले कर बढाइदिएको छ । त्यस्तै, तोलामा ११ सय रुपैयाँले बढाइदिएको छ । यसको प्रभाव पनि सुनको मूल्यमा परेको छ ।
प्रकाशित मिति : असार ६, २०७६ शुक्रबार १८:८:४१,